Ezona smartphones ze-10 zinamandla ngo-Agasti 2019, ngokwe-AnTuTu | I-Androidsis
Ezona smartphones ze-10 zinamandla zika-Agasti 2019, ngokwe-AnTuTu
Enye yeebenchmark ezaziwa kakhulu, ezaziwayo nezithembekileyo kwihlabathi le-Android, ngaphandle kwamathandabuzo, AnTuTu. Kwaye, kunye neGeekBench kunye nabanye, oku kuhlala kubonakala kuthi njengebhentshi ethembekileyo esiyithatha njengendawo ekubhekiswa kuyo kunye nenkxaso, kuba isinika ulwazi olufanelekileyo xa kuziwa ekwazini ukuba namandla, ngokukhawuleza nangokufanelekileyo Iselfowuni, nokuba yeyiphi na.
Njengesiqhelo, i-AnTuTu ihlala yenza ingxelo yenyanga okanye, endaweni yoko, uluhlu lweetheminali ezinamandla kwintengiso, inyanga nenyanga. Ke ngoko, kweli thuba litsha sikubonisa inyanga ka-Agasti, eyokugqibela evezwe ngumgangatho. Masibone!
Olu luhlu luye lwatyhilwa kutshanje kwaye, njengoko sibonisa, loluka-Agasti ophelileyoKungenxa yoko le nto i-AnTuTu inokubeka oku kwinqanaba elilandelayo kulenyanga, esiza kuyibona ngo-Okthobha. Nazi ii-smartphones ezinamandla kakhulu namhlanje, ngokweqonga lokuvavanya:
Njengoko kunokuchazwa kakuhle kuluhlu, nangona kukwiTshayina, el I-Black Shark 2 Pro kunye Ifowuni ye-Asus ROG 2 ngabokuqala, ngamanqaku angama-469,708 kunye nama-469,590 ngokwahlukeneyo, kwaye umahluko mkhulu kakhulu phakathi kwabo.
Indawo yesithathu, yesine neyesihlanu kuhlala i OnePlus 7 Pro, Nubia Red Magic 3 kunye OnePlus 7 nge 447,345, 443,452 kunye namanqaku angama-443,241 ngokwahlukeneyo, ukuvala iindawo ezintlanu zokuqala kuluhlu lwe-AnTuTu.
Okokugqibela, isiqingatha sesibini setafile senziwe nge Black Shark 2 (367,981) Xiaomi Mi 9 (367,718), (367,003), I-ZTE Axon 10 Pro 5G (361,449) Meizu 16s (360,327) kunye Redmi K20 Pro, ngolandelelwano olufanayo, ukusuka kwindawo yesithandathu ukuya kweyeshumi. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-smartphone yeZTE ekhankanyiweyo kuphela kolu luhlu olune-6GB RAM; abanye, kwelinye icala, bane-RAM eyi-8 GB ubuncinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ezona smartphones ze-10 zinamandla zika-Agasti 2019, ngokwe-AnTuTu
I-ASUS ROG Ifowuni 2 esungulwe ngokusemthethweni eYurophu
IXiaomi Mi MIX 4 kunye neMIUI 11 ziya kuziswa kwangolo suku lunye